Fanambarana collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana (09/01) | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Fanambarana collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana (09/01)
Izahay ato amin ‘ny collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana dia manao izao fanambarana manaraka izao :
1- Izahay dia manamafy hatrany ny fanohananay tsy misy fepetra ny filoha Ravalomanana ary mitaky ny fiverenany tsy misy hatak’andro.
2- Izahay dia manamafy ny fitakianay ny fampiaharana ireo satan’i Maputo sy ny « acte additionnel d’Addis Abeba » ka noho izany :
· Mitaky ny fametrahana haingana ireo andrim-panjakana rehetra mitantana ny tetezamita ahafahana miroso amin’ny fifidianana malalaka sy mangarahara.
· Mitaky ihany koa ny fanasaziana ireo rehetra tsy manaraka ny fampiharana io sata io
3- Izahay dia tsy miombon-kevitra ary tsy afaka manambatra hery amin’ireo ankolafin-kery isan-karazany tsy manameloka ny fanonganam-panjakana izany hoe tsy mitaky ny ara-dalana.
4- Izahay dia manainga antsika rehetra tia tanindrazana, mitaky ny fiverenan’ny ara-dalana , mitaky ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana mba handray an-tanana ny fiainan’ny tanindrazana ary tsy hanaiky intsony ny tsindry hazo lena ataon’ny mpanjanaka.
Ny mpikambana ato amin’ny Collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana